Hiroshima | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » Hiroshima
Updated: 2016-08-08 10:26
ဂဲန်းဘစွတ် ဒုံးမ် ( အနုမြု ဒဏ်ခံခဲ့ ရတဲ့ ဒုံးမ် အဆောင် အအုံ ) ဟီရိုရှိမား ဂျပန်
၁၉၄၅ခုနှစ် ၈လပိုင်း ၆ ရက် နေ့ မနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ် ၊ လူသားတို့ ရဲ့ သမိုင်း မှာ ပထမဦး ဆုံး အနုမြူ ဗုံး အခွဲ ခံ လိုက်ရတဲ့ ဟီရိုရှိမား ခရိုင် စက်မှု တိုးတက်ရေးအဆောက်အအုံ ။ထိုနေရာကနေ အရှေ့တောင်...
Updated: 2016-06-28 16:55
အိုကိုနော့မိရာခိ ( အစုံ ကြော် )
ဟိရို ရှိမား ရဲ့ နာ မည် ကြီး အစား အစာ လို့ ပြော ရရင် ( ဟီရို ရှိမား အိုကိုနော့မိရာခိ ) ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ဂျုံ ကို အခြေ ခံ ထား ပြီး တော့ အသီး အရွက် တွေနဲ့ ၀က် သား တို့ ကို ထည့် ပြီး တော့ ရောသမမွှေ...
Updated: 2016-06-28 16:51
ရာမတို အမျိုး သားပြတိုက် ဟီရိုရှိမား ဂျပန်
၂၀၀၄ ခုနှစ် ၄ လပိုင်း မှာ ဖွင့်လှစ် ပြ သခဲ့ တဲ့ ရာမတို အမျိုး သား ပြတိုက်( ခုရဲရှိခိုင်းဂျိ သမိုင်း ပြတိုက်) မှာ ဆို ရင် ၊ ၁၀ မိနစ် ကို တိုက်သင်္ဘော တစ် စီး ထုတ် လုပ် နိုင် ခဲ့ တဲ့ ဂျပန် နိ...
Updated: 2016-06-28 16:23
ဟီရိုရှိမား ငြိမ်းချမ်းရေး အထိမ်းအမှတ် ပန်း ခြံ ဟီရိုရှီးမား ဂျပန်
ငြိမ်းချမ်းရေး အထိမ်းအမှတ် ပန်း ခြံဟာ ၊ အနုမြှူဗုံး ဒဏ်ကြောင့် သေ ကြေခဲ့ ရတဲ့ သူတို့ အတွက် ၀မ်း နည်း ခြင်း မှတ် တိုင် တစ် ခု ဖြစ်တဲ့ ပန်း ခြံ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုမြူ ဒဏ် ခံ ခဲ့ ရတဲ့ အဲဒီတုန်း က...
သဘာဝရှုခင်း သတင်းအချက်အလက်များရှုခင်းအတွက် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများသဘာဝပန်းခြံများ
Updated: 2016-06-28 16:11
မီရာဂျိမား( အိစွတ်ခုရှိမ ဘုရာကျောင်း ) ဟီရိုရှိမား ဂျပန်
အိစွတ်ခုရှိမ လား မိရာရှိမ လား တစ် ကျွန်း တည်း ဖြစ်ပြီး တော့ နာမည် ကွဲ နေတဲ့ ကျွန်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟီရို ရှိ မား ခရိုင် ဟိစွတ်က အချိ မီရာဂျိမား က နာမည် ကြီး ပြီး ယူနစကို ရဲ့ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေး မှု အ...
Updated: 2016-06-28 15:52
ဆဲန်းကိုဂျိ ( အိုနိုမူချိ) ဘုရားကျောင်း ဟိရိုရှိမား ဂျပန်
နာရ ခောတ် ( ၇၆၀ခုနှစ်) မှာ ဟိုးအွန်းဘုန်းတော်ကြီး က တည်ထား ခဲ့ ပါတယ်။ ပြန်လည် တည်ထောင်ရေး နောက် ပိုင်း အယ်ဒို ခောတ် မှာ တည်ထား ခဲ့ တဲ့ ၃လွှာဆောင် နဲ့ နိအိုး ဂိတ် က ယခု ထိ ရှိ နေပါသေး တယ်။ အတွင်း ပိုင...
Updated: 2016-06-28 14:54
ရှု ခု ခဲ ပန်းခြံ ဟီရိုရှိမား ဂျပန်
ရှေးတရုတ် နိုင် ငံ ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် သဘာဝမသာဒ ကျ တဲ့ နေရာ တစ် ခု ဖြစ်တဲ့ စိုင်ကို ရေ ကန် ကို မူ ယူ ပြီး ပြလုပ် ခဲ့ တယ် ဆို ပြီး ပြော ဆို ကြ ပါတယ်။ အတွင်း မှာ တော့ ရာမဂ၀ ရဲ့ အလှ ၊ ခဲအိ ရခုပုံ စံ ၊...
Updated: 2016-06-28 14:39
အိုကော်နော့မိ ရွာ ( စိတ်ကြိုက်ရွာ ) ဟိရိုရှိမား ဂျပန်
စစ်ကြီး ပြီး တဲ့ နောက်ပိုင်း ဟီရိုရှိမား မြို့ လယ် ၊ ရှင်း တဲန်း ချိ ကွင်းပြင် ကျယ် မှာ စု ပေါင်း ဖွင့် လှစ် ထား တဲ့ အိုကိုနော့မိရာခိ ( ဂျပန် စတိုင် ပီဇာ ) အရောင်း ဆိုင် တို့ က အစဖြစ်...
Updated: 2016-06-27 14:53
အာနဂေါမဲရှိ ( ငါးရှဉ့်ထမင်း)
နာမည်ကြီး မိရာဂျိမား ဂုံးကောင်း တို့ နဲ့ အတူ နာမည်ကြီး တဲ့ ( အာနာဂေါမဲရှိငါးရှဉ့်ထမင်း ) ၊မိရာဂျိ ဘူ တာ မှာ ရောင်းချ တဲ့ ဘူတာ ထမင်း ဗူး က နေအစပြု ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။ ရနံ့လေး တွေ သင်းနေ အောင် ကင် ထား...